५० लाख उपत्यकाबासीलाई लालबाबुको आश्वासन, ‘अब तपाईंले मास्क बिर्सनुहुनेछ’ – Nirantarkhabar
५० लाख उपत्यकाबासीलाई लालबाबुको आश्वासन, ‘अब तपाईंले मास्क बिर्सनुहुनेछ’
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितले काठमाडौँलाई हेर्न विदेशबाट पर्यटक आउने गरी हरियाली पार्ने उद्घोष गरेका छन् । तपाईको खबर डटकमका सम्पादक नवराज कुँवरसँगको संक्षिप्त संवादमा उनले हरियाली काठमाडौँ कार्ययोजना ल्याउन लागेको समेत बताए । प्रस्तुत छ लालबाबुसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंश ।
देशको राजधानी नै प्रदूषणको चरमचुलिमा रहेका बेला वातावरणमन्त्री हुनुभएको छ, काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्नेबारे के योजना छन् ?
वास्तवमै यतिबेला मुलुकको राजधानीको हालत सार्हैै दयनीय छ । यही फोहोर र प्रदुषणका कारण पर्यटक आगमनमा कमी आएको छ । त्यतिमात्रै होइन, उपत्यकाबासीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ । अब यसको निराकरण खोज्नेछु । काठमाडौँलाई हरियाली र सफा शहरका रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्यवन गर्नेछु ।
योजना बनाउने हो कि खाका कोरिसक्नुभएको छ ?
मैले यो जिम्मेवारी पाउँछु भन्ने टुगो नलागेकाले त्यसको पूर्व तयरी गर्न पाइएन । तर, अब मैले पाएको जिम्मेवारीअनुसार योजना तर्जुमा गर्ने काममा जुटिसकेको छु । केही दिनपछि नै म आफ्ना कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नेछु ।
काठमाडौँलाई हरियाली बनाउन त्यति सजिलो छ र ? अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण भूमिनै अपुग भइसकेको अवस्था छ नि?
म चाहिँ चुनौतीलाई अवसर ठान्छु । समस्या नै नभएको ठाउँमा काम गरेँ, उपलब्धि मिल्यो भनेर गर्भ गर्नु त्यति शोभनीय हुँदैन । जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ । हामीले अहिले समस्यामात्रै देखेका छौँ, समाधानपट्टि केन्द्रित भएका छैनौँ । समस्या देखिसकेपछि समाधान पहिल्याउनतिर लाग्नुपर्छ अवस्य भेटिन्छ ।
कस्तो शहर बनाउने काठमाडौँलाई ?
अहिले काठमाडौँ प्रदुशित छ । तोकिएको स्तरभन्दा पाँच गुणा बढी वायु प्रदुषण भएको तथ्यांकहरु आइरहेका छन् । त्यही भएर पर्यटकको आगमनमा कमी आएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाबासी धुलो र धुवाँको कारणले विभिन्न रोगको शिकार हुनुपरेको छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न काठमाडौँलाई हरियाली, सफा र सुन्दर शहरको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यही अनुसारको योजना ल्याउने छौँ ।
योजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्न कति समय लाग्ला ?
योजना बनाउन समय नलाग्न सक्छ । त्यो कार्यान्वयनमा लैजाँदा समस्या आइपर्न सक्छ । यति नै समय भनेर तोक्नुभन्दा पनि मेरो कार्यकाल म यतिकै खेर जान दिने छैन भनेर बुझ्दा राम्रो हुन्छ ।
भनेपछि पाँच वर्ष जति लाग्न सक्छ?
त्योभन्दा अगाडि नै पनि हुन सक्छ । तर, यत्रो शहरलाई हरियाली र सफा बनाउने भन्ने विषयले अलि समय लिन पनि सक्छ । जे होस्, काठमाडौँ हरियाली बनाउने योजना कार्यान्वयन भएपछि काठमाडौँ उपत्यकाबासीले मास्क बिर्सनेछन् ।
तपाईहरुले भोटमाग्दा जनतालाई भन्नुभएको थियो–तपाईहरु हामीलाई स्थित सरकार दिन्छौँ, हामी तपाईलाई समृद्धि दिन्छौँ । पाँच वर्षमा कस्तो समृद्धि दिनुहुन्छ ?
सबैले इमान्दार भएर आ–आफ्नो ठाउँमा काम गर्ने हो भने समृद्धि सम्भव छ । दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ । हो, हामीले जनतासँग जे भनेर भोट माग्यौँ, हामीलाई जनताले जिताए । अब हाम्रो पालो आएको छ । यसमा हामी इमान्दार भएर काम गर्ने छौँ । मुलुकमा विकासका योजनाहरुलाई प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्ने, भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्ने योजना कार्यान्वयन भएको अवस्थामा मुलुक समृद्ध हुन समय लाग्दैन ।
केपिलासगढी गाउँपालिकाका प्रमुख कृष्णकुमार राईलाई छ प्रश्न ?
स्व. सुधिरको सम्मानमा नुतनले ल्याए “सोलु खोला तरेर आज”
संघिय समाजवादी फोरम प्रदेश १ मा अरु भन्दा बलियो बन्दैछ : केन्द्रिय सदस्य बस्नेत
गृहमन्त्रीले चिनियाँ राजदुतसँग भने– सुन तस्करी र डलरको अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नुस्